Ukutholwa Kwe-Bot Traffic Ngeziphakamiso Ze-Semalt
Ngeke kube yiphutha ukusho ukuthi ukuzenzekelayo kusize amabhizinisi amaningi ukuba asebenze ngokuphepha nangokuphepha ku-intanethi. Ziyindlela ephephile futhi elula yokuvimbela imisebenzi yokukhwabanisa kakhulu futhi ingakusiza ukwandise inzuzo yakho. I-scam iyenziwa ngezindlela eziningi futhi ngokusebenzisa izixhumanisi ezihambisanayo futhi. I-Bot traffic ikhiqizwa ngezixhumanisi ezihambisanayo, okungenalutho futhi ayikwazi ukukuqinisekisa imiphumela oyifunayo - développement des logiciels rh.
U-Alexander Peresunko, i-10 (Semalt uMenenja weNtuthuko yabaThengi, uthi namuhla kuye kwadingeka ukuba bonke abomabhizinisi babone, bahlaziye, bahlaziye futhi baqede ukuhamba kwenkohliso. Uma unezinhlelo ezithile zokubambisana nabathengi abafuna ithrafikhi yangempela yabantu, khona-ke kuba kubalulekile kuwe ukuba ususe umgwaqo ongeyiphutha kanye nebhodi, unikeze amakhasimende akho ngezimoto zomthetho ezisemthethweni futhi zangempela. Uma ungenzi kanjalo, ama-bots azokhipha imali kumawebhusayithi akho maduze, angabuyi lutho ngaphandle kokuzisola. Imisebenzi ehlukene ingafezwa uma izivakashi zakho zingaveli ezinhlelweni noma ezithuthumayo. Yenze ibe yiqiniso futhi ivumelekile ngoba lena kuphela indlela ongayinqoba ngayo ukwethenjwa kwamakhasimende akho. Ngivumele lapha ngitshele ukuthi i-bots yokukhohlisa kanye nomgwaqo ongezingeni eliphansi angeke lenze noma yikuphi ukuthengisa noma ukuhola ibhizinisi lakho. Lokhu kungenxa yokuthi izinga lokunciphisa nabo liphezulu futhi ngeke lizuze abanikazi bewebhu.
Ngamafuphi, kudingeke ukuba sonke sithole imoto yangempela futhi sivimbele ukufika kwebhodi. Ukumaketha kokubambisana sekuye kwaphela iminyaka futhi sekukhulile ngesikhathi. Kukhona ukukhathazeka okuqhubekayo mayelana nemisebenzi yokukhwabanisa kanye namaqhinga aphuthayo asetshenziselwa abathintekayo, esusa imali kubakhangisi. Uma ungathí sina ngokuthatha ibhizinisi lakho ezingeni elilandelayo, akufanele nanini uthathe imali kubakhangisi bakho ngokusekelwe kubhu yakho kanye nomgwaqo ongeyena. Bonke abasebenzisi kumele bazame ukukhiqiza ukuthengisa kwangempela futhi bayeke ukuthembela ekuvakasheni okungewona okwangempela. Ukuthumela ithrafikhi engamanga kumakhasi akho wewebhu noma izixhumanisi ezihambelanayo ngeke zikuthole ukudayiswa. Kunalokho, kungonakalisa ukubukeka kwewebhu lakho. Uma i-Google Analytics ibonisa ibhuthi kanye nomgwaqo onobuqili njengokwenyama, yisikhathi sokuvimba lawo makheli we-IP ngokushesha ngangokunokwenzeka. Abambisene nabo abakhohlisayo bathenga ithrafikhi kusuka kumawebhusayithi ahlukene ngokukhokha ama-dollar ambalwa futhi bombard amasayithi kanye nezixhumanisi ezixhunyaniswe nazo eziningi zokubuka nokuvakashelwa okungenakuguqulwa ekuthengisweni.
Ama-bots namathuluzi ahlukene atholakalayo ekwenzeni imoto engalungile. Le mgwaqo kanye nokuvakashelwa akukwazi ukudala imibono yabantu yangempela kuwebhusayithi yakho. Zakhiwa ngokusebenzisa izinhlelo ze-bot eziqhubeka zivuselela amasayithi njalo ngomzuzu. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthola amabhubhu bese uyilahla. Cishe bonke abathengisi ababambisene nabo basebenzise la mabhubhu ukuze bathole eziningi ezitokisini emakhasini abo ewebhu, kodwa abasoze bathola ukuthengisa nokuchitha idumela labo eliku-intanethi ngenxa yalezi zenzo zokukhwabanisa. Kumele uthintane nochwepheshe we-IT ngale ndaba nokuthi ungayilahla kanjani.